တရုတ်အဖြိုက်နက်လွိုင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Huacheng
အဖြိုက်နက်စီးဆင်းမှု port ကို
အဖြိုက်နက်လွိုင်း shaped အစိတ်အပိုင်းများ
မြင့်မားတဲ့အပူချိန် molybdenum အလွိုင်းမှိုပစ္စည်း
molybdenum Pierce mandrel
3 ~ 18,75 g / စင်တီမီတာ 3) နှင့်မြင့်မားသောအရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားခိုင်မာသော, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ wear ခုခံမြင့်မားဆုံးစွန်ဆန့ခွန်အားကောင်းသောကျဇယားအနိမ့်အခိုးအငွေ့ပါ g / စင်တီမီတာအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆများသောအားဖြင့် 16.5: tungsten အလွိုင်းကဲ့သို့သောအများအပြားအထူးဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ် ဖိအားမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ, ကောင်းသောအပူတည်ငြိမ်မှု, လွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့, ချေးခုခံ, ကောင်းသောထိတ်လန့်ခုခံမြင့်မားဓါတ်ရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုစွမ်းရည်, ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုခုခံနှင့်ခုခံ crack, Non-အဆိပ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သူတို့ကနိုင်ငံတကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း ...
FOB စျေး: Quote ရေပန်းစားစျေးကွက်အရသိရသည်
Min.Order အရေအတွက်: MOQ တိကျသောထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ်မူတည်
tungsten alloys are the metals which usually difficult to melt, general composed by W – Ni – Fe (tungsten – nickel – iron), or W – Ni – Cu (tungsten – nickel – copper), or W – Ni – Cu – Fe (tungsten – nickel – copper -iron), some tungsten alloys also added Co (cobalt), Mo (molybdenum), Cr (chromium), etc. The alloy haveahigh melting point, are twice as dense as steel, and are 50 percent heavier than lead. tungsten content in the alloy usually accounts for 90%~98%, which is why tungsten alloys can haveahigh density (usually 16.5 g/cm3~ 18,75 g / စင်တီမီတာ 3) ။
3 ~ 18,75 g / စင်တီမီတာ 3) နှင့်မြင့်မားသောအရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားခိုင်မာသော, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ wear ခုခံမြင့်မားဆုံးစွန်ဆန့ခွန်အားကောင်းသောကျဇယားအနိမ့်အခိုးအငွေ့ပါ g / စင်တီမီတာအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆများသောအားဖြင့် 16.5: tungsten အလွိုင်းကဲ့သို့သောအများအပြားအထူးဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ် ဖိအားမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ, ကောင်းသောအပူတည်ငြိမ်မှု, လွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့, ချေးခုခံ, ကောင်းသောထိတ်လန့်ခုခံမြင့်မားဓါတ်ရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုစွမ်းရည်, ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုခုခံနှင့်ခုခံ crack, Non-အဆိပ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သူတို့ကနိုင်ငံတကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း
ကြောင့်အထက်ပါအထူးဂုဏ်သတ္တိများရန်, အဖြိုက်နက်သတ္တုစပ်ကျယ်ပြန့်ဂေါက်သီးကလပ်, ငါးဖမ်းဆွဲပြား, လှံလက်နက်, မော်တော်ဘုတ်များနှင့်ပြိုင်ကားကားများအပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောအားကစားအဖြစ်အများအပြားနယ်ပယ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဒိုင်းကာ devices များ, မျက်မှောက် devices များ, အိုင်ဆိုတုပ်ကွန်တိန်နာ, အဖြိုက်နက်လွိုင်းအီလက်ထရောနစ်ထုပ်ပိုး, ရေနံတူးဖော်, ကျောက်မီးသွေးသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း, စစ်တပ်ဘက်တွင်ကျည်ဆံ, ပျံဒုံးကျည်များ, ချိန်ခွင်လျှာဘောလုံး, စသည်တို့အပါအဝင်ဓါတ်ရောင်ခြည်-အထောက်အထားစမ်းသပ်ပြွန်, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, အပါအဝင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်, ။
- Tungsten အလွိုင်းဘား, လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, etc
- အဓိကအားဖြင့်လှံလက်နက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြု Tungsten ချောင်းတွေ
- ဂေါက်သီးခွံမာသီး, ငါးဖမ်းဆွဲပြား
- ရွက်လှေများ, လှေ, ရေငုပ်သင်္ဘောများ, ဒါမှမဟုတ်လှေ၏အခြားအမျိုးအစားများအပေါ်တစ်ဦးတန်ပြန်အဖြစ်အသုံးပြု
- လေယာဉ်, ရဟတ်ယာဉ်များ, F1 ကိုကားများနှင့်အခြားကားတစ်စီးအစိတ်အပိုင်းများ
- ပီယပ်လက်နက်ဖို့အသုံးပြု Kinetic လက်နက်အနိုင်အထက် projectile
- လုပ်ကွက်ဟန်ချက်ညီ, ရေနံတူးဖော်ကိရိယာများ
- အစိတ်အပိုင်းများကိုကာကှယျဖို့, ကုန်ခမ်းယူရေနီယံစွမ်းအင်, X-ray, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, စသည်တို့ဘို့ပါဝါထိန်သိမ်း
- မိုဘိုင်းဖုန်း / နာရီ vibrator
- အဖြိုက်နက်လွိုင်း nozzle
နောက်တစ်ခု: မြင့်မားတဲ့အပူချိန် molybdenum အလွိုင်းမှိုပစ္စည်း
molybdenum အရက်ဆိုင် / strips တွေ
စက်မှုအာရုံစူးစိုက်မှုဇုန်, Yuduo မြို့, Jiangyan, Jiangsu, တရုတ်။
© Copyright - 2017-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - အသားပေးထုတ်ကုန်များ- ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း